Imfundo ePhakamileyo kunye noHlaziyo oluneMacala amane | Martech Zone
Imfundo ePhakamileyo kunye noHlaziyo oluneMacala amane
NgoMvulo, Oktobha 11, 2010 NgoMgqibelo, Septemba 26, 2015 UAdam Omncinci
Iiyunivesithi zikhaba kwimithombo yeendaba zentlalo! Zikwi-Twitter, kuFacebook kwaye ziqala ukusebenzisa usetyenziso lwe-geolocation njenge-Foursquare. Kutheni le nto izakusebenza? Uninzi lwabafundi abaza kwenza izigqibo malunga nokuba bazokuya phi kwisikolo kukhenketho lwekhampasi. Ke ukwenza umbono olungileyo ngexesha lokhenketho lokuqala kubalulekile. Isikwere sivumela iiyunivesithi ukuba ziphonononge ikhampasi ngendlela entsha. Isicelo sinokusetyenziselwa ukushiya iingcebiso ukuze kuqinisekiswe ukuba amathemba ayazi apho aya khona kwaye enze ntoni ngexesha lotyelelo. Ezinye izizathu zokuba iiyunivesithi zisebenzise izicelo ze-geolocation zezi:
Yabelana ngeenkcukacha ezincinci
Yabelana ngolwazi malunga neempawu zomhlaba, izakhiwo kunye needilesi
Imibuzo yeedilesi ngaphambi kokuba ibuzwe (ukhuseleko, ukuhamba)
Nika imivuzo kunye neebheji ukukhuthaza abafundi abatsha ukuba baphonononge ikhampasi
Yabelana ngezithethe zesikolo
Yenza ukuba abafundi babhaptizwe eluntwini ngaphandle kwenkampu
Fumana iingcebiso kubantu abakudala
Olunye usetyenziso lwe-Foursquare kwindawo yaseyunivesithi yeyabafundi “abaphinda batyelele ikhampasi”. Isikwere sinokubanceda bafumanise ukuba kwenzeka ntoni ukusukela oko baphumelela. Umzekelo, i-alum iya kujonga kwaye ibone isakhiwo esitsha. Inkangeleko engafaniyo inokubaluleka kwabanye abantu ukuba babuyele kwiDyunivesithi…. ixesha liza kuxela kuloo mntu. Ukongeza kolo phawu sisicelo esiya kubaxelela injongo entsha yokwakha kunye nembali "entsha". Inceda i-alum ihlale ixhunyiwe kwaye ingaziva ilahlekile.
IHarvard sisinye isikolo esisebenzisa iiKota eziMine. Banikezela ngolwazi lwembali kunye nezinto ezimnandi zokwenza ekhampasini, ezinokufunyanwa zonke kwiZikwere eziphantsi kwe Harvard iphepha. IYunivesithi yaseHarvard inamaphepha aliqela kwiZikwere ezine kwizakhiwo zayo ezininzi.
Iiyunivesithi ziyaziwa ngokuba neziganeko ezininzi. Isicelo esahlukileyo sokuncedisa ukwabelana ngazo zonke ezi ziganeko NgamaxeshaEsi sicelo sivumela abasebenzisi ukuba bangene kunye nokulayisha iifoto kunye nemiyalezo yokwabelana malunga nomsitho. Lolu hlelo lokusebenza lunamandla okudibanisa abafundi abatsha kunye nealumni. Badityaniswa ngamava abo ekwabelwana ngawo kwaye banokubona ngexesha lokwenyani okwenzekayo kwiminyhadala eyenzeka ekhampasini. Ngoku ka Mashable, ngoMeyi 2010, iYunivesithi yaseSt. Edwards yasebenzisa iWrrrl ukukhumbula umsitho wokuthweswa izidanga.
Olunye ukhuthazo lweeyunivesithi ukuba luqale ukusebenzisa usetyenziso lwe-geolocal sisixa sedatha enokuqokelelwa. Idatha inokubonisa ukuba yeyiphi imisitho ekuyeyona iyeyona mininzi, ukubonwa kwabantu, inkcubeko yekholeji kwaye inokwenza izigqibo ezinolwazi ngokusekwe kwinto abafundi abayiphendulayo. Amaziko emfundo aphakamileyo amkela izicelo ze-geoloaction ziya kuba phambili komdlalo kwaye ziya kuba nakho ukunxibelelana nabafundi bawo ngeendlela ezixabisekileyo.
tags: iminyhadala yasekholejiniiziganekoezinegeolocationkwiiyunivesithiiminyhadala yaseyunivesithi
Imithombo yeendaba yeNtlalo yokuKhokela kunye neMfundo
Ukwamkelwa komntwana ongamzalanga abe ngowakho, uMama, ukwanda
UKyle, enkosi ngesi sithuba sikhulu. Ndiyingcali kwezonxibelelwano kwikholeji encinci yenkululeko kwezobugcisa eMorhead, eMinnesota (http://foursquare.com/concordia_mn). Asinabafundi abaninzi abayisebenzisayo kodwa sijonge iindlela zokwandisa isiseko sabasebenzisi kwaye ngethemba lokuba siyayinyusa ingqesho yethu.
Ukucinga ukuba ucinga kubaluleke ngakumbi ukuba ube neengcali okanye iingcebiso kwikhampasi? Sisebenze ukongeza iingcebiso kodwa siyasokola kwiindlela zokudibanisa inxenye yenkuthazo yamacala amane. Ngaba unazo naziphi na iingcebiso?
Epreli 30, 2012 ngo-11: 04 AM
Enkosi Kyle ngokujonga amathuba okusebenzisa imithombo yeendaba kwezentlalo ziiyunivesithi. Imfundo ePhakamileyo ikwindawo yoHlaziyo. Ingaphaya nangaphezulu kweTekhnoloji yoLwazi kodwa isekwe kuLwazi, i-Knowmatics, iTekhnoloji yoLwazi loLwazi kunye namaShishini oLwazi.
'I-Knowmatics - Inguquko eNtsha yeMfundo ePhakamileyo' kwiJenali yeYunivesithi yeHlabathi 4,1,2011: 1-11 baxoxe ngeminye yale micimbi ngokunzulu ngaphandle kweethiyori zikaMathew zoLwazi lokuSebenzisa-iMveliso, i-Knowmatics kunye neeNkampani zoLwazi. Imicimbi enxulumene noko kuthethwe ngayo http://www.slideshare.net/drrajumathew